दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई ६ विकेटले हरायो, तीन खेलको सीरीज १-१ को बराबरीमा
दक्षिण अफ्रिकाको जीतमा हेनरिक क्लासेन र जे.पी. डुमिनीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अर्धशतकीय पारी खेले
बिहीवार, १० फागुन २०७४, सगरमाथा पोष्ट
काठमाडौँ , १० फागुन ।
दक्षिण अफ्रिकाले सेन्चुरियनमा भएको दोस्रो टी-२० म्याचमा भारतलाई ६ विकेटले हराउँदै शृंखला बराबरीमा ल्याएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको यो जीतसँगै तीन खेलको सीरीज १-१ को बराबरीमा पुगेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १८८ रन बनायो। भारतका लागि मनिष पाण्डे र महेन्द्र सिंह धोनीले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै ४ विकेट गुमाउंदै १८८ रन बनायो । भारतका लागि पाण्डे र धोनीले अर्धशतकीय पारि खेल्दै ९८ रनको साझेदारी गरे। शर्माले ७९ र धोनीले ५२ रन बनाउँदै दुबै नटआउट रहे। भारतले दोस्रो ओभरमै रोहित शर्मालाई शून्य रनमा गुमाएको थियो। यसपछि आएका सुरेश रैनाले ३१ रन बनाए। शिखर धवनले २४ रन बनाएर आउट भए। बुधबार कप्तान कोहली पनि चल्न सकेनन्। १ रन बनाएर उनी आउट भए। दक्षिण अफ्रिकाका लागि सी.जे. डालाले दुई, जे.पी. डुमिनी र ए.एल. फेहलुकवायोले १-१ विकेट लिए।
१८९ रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले ८ बल बाँकी छँदै ४ विकेट गुमाएर जित हात पार्‍यो। दक्षिण अफ्रिकाको जीतमा हेनरिक क्लासेन र जे.पी. डुमिनीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अर्धशतकीय पारी खेले। खराब सुरूवात गरेको दक्षिण अफ्रिकाले २४ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। भारतीय तिब्र गतिका बलर जयदेव उनादकटले चौथो ओभरमा जोन-जोन स्मट्सलाई २ रनमा सुरेश रैनाको हातबाट क्याच आउट गराए। उसका लागि हेनरिक क्लासिकले सर्वाधिक रन बनाए। यस्तै जे.पी. डुमिनीले नटआउट ६४ रन बनाए। हेंड्रिक्सले २६ रन बनाउँदै आउट भएका थिए। भारतका लागि उनादकटले २, शार्दुल ठाकुर र हार्दिक पाड्याले एक-एक विकेट लिए।